Hlobo Luni Lombhobho Wokucima Engiwufunayo Ekhishini Lami?
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Hlobo Luni Lombhobho Wokucima Engiwufunayo Ekhishini Lami?
2020 / 10 / 27 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 982 0
Manje lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Noma ngabe ungowesilisa noma owesifazane othanda ukuchitha isikhathi esiningi ekhishini, kunento eyodwa oyaziyo. Ngemuva kokuphekela umndeni wakho noma abangane bakho amahora amaningi, uzodinga ukuhlanza yonke into. Akukho okubi kakhulu njengokuchitha amahora uklwebha amapuleti namapani ngaphambi kokuba ukwazi ukuphumula usuku.
Ukuthenga The Best Ikhishi Izinsiza kusebenza
Into yokuqala kakhulu ofuna ukuyenza kuzoba ukuhlomisa ikhishi lakho ngombhobho wokugaya. Lolu empeleni luhlobo lwompompi osinki ozofuna ukuwuthenga ekhishini lakho. Oompompi basePulldown bebekhona isikhashana manje futhi bakhombisile ukuthi basebenza kakhulu, uma kuziwa ekwenzeni impilo ibe lula ekhishini.
Uma uzibuza ukuthi uluhlobo luni lombhobho wepulpownown ofuna ukuyikhetha ungahlala umnyama isikebhe ekhishini lokho kuzoba nenketho yokudonswa phansi. Vele, i-matte emnyama yokudonsa phansi umpompi wasekhishini empeleni ingaba yindlela engcono kakhulu kuwe. Zinhle, zimnyama okusho ukuthi zihamba nakho konke futhi, i-matte empeleni akulula kangako ukuyihlanza ngakho-ke, ungahle uthande ukuya kuleyo nketho.
Nguyiphi Iphayiphu Oyikhethayo?
Vele, uzokwazi ukuthola amanani amaningi ahlukene kumikhiqizo eminingi ehlukahlukene. Uma sicabanga ukuthi awuyena uchwepheshe ompompi basekhishini kunengqondo ngokuphelele ukucabanga ukuthi ungacabanga ukuthi umpompi wasekhishini oshibhile onesistimu yokudonsa uzoba muhle njengowabizayo. Yebo, ungahle ube ungalungile kulokhu.
Asikuphakamisi ukuthi kufanele uthenge umpompi wasekhishini obiza kakhulu laphaya ukuze uthole ikhwalithi enhle. Noma kunjalo, izinketho ezingabizi kakhulu kungenzeka zingabi yilokho okudingayo ukuthi ukufune. Ngokuyinhloko, ozofuna ukukwenza kungaba ukugxila ompompi ngezibuyekezo ezinhle bese uqala ukuqhathanisa amanani. Mhlawumbe, ungahle ukwazi ukuthola umkhiqizo oshibhile onezibuyekezo ezinhle noma, ungahle udinge ukuya kokuthile okubiza kakhulu. Noma ngabe ikuphi, qiniseka ukuthi uzothenga okuhle kakhulu.
Edlule :: Ikhishi Lanamuhla Likucwila Olandelayo: Izinzuzo zeMatte Black Pull Down Ikhishi Lompompi